Mpamatsy sy orinasa mpanamboatra masinina boaty China Box
Masinina Cartoning boaty
Masinina Carton HTH-100
HTH-100 Masinina haingam-pandeha haingam-pandeha
Masinina Carton HTH-120
HTH-120 Masinina haingam-pandeha haingana
HTH-120G Machine Cartoning haingam-pandeha tanteraka
Ny cartoner haingam-pandeha haingam-pandeha HTH-120G dia milina fanaovana carton automatique tanteraka izay afaka mihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha amin'ny maody mitohy. Ity milina famonosana ity dia miasa amin'ny fahamendrehana avo lenta ary manangona baoritra 150 isa-minitra, izay in-2-3 heny haingana kokoa noho ireo mpanao baoritra mahazatra. Ny fonosana dia vita amin'ny fizotrany maharitra, raha mihena kosa ny tabataba sy ny enta-mavesatra.
Ny milina Cartoning dia mandray endrika famolavolana rafitra mihantona. Izy io dia manana endrika vaovao mifangaro miaraka amin'ny fidirana hikolokoloana mety, ahafahan'ny mpandraharaha manakaiky ny fitaovana mora foana ary manadio na manolo singa. Ny firafitra mihantona ao amin'ilay masinina iray manontolo dia mamela ny fako hianjera ao amin'ilay singa fanangonana etsy ambany, ka ho mora foana ny hadio. Ny masinina iray manontolo dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony ary manisy fikajiana mihidy sy lalan-dàlana. Ny fitaovana mitondra fiara dia mijanona ao aoriana ary misokatra tanteraka eo amin'ny lafiny mpandraharaha, izay mahafeno ny fenitra GMP.
Ny lanja sy ny refy
Refy amin'ny mm 5713 × 1350 × 1900 (L × W × H)
Milanja amin'ny kilao 2000KG
Hafainganana amin'ny famokarana 120-170 baoritra / min （miankina amin'ny vokatra）
Gramme Eo anelanelan'ny (250-450) g ​​/ m2 (arakaraka ny refy)
Faritra haben'ny boaty (100-250) mm × (60-130) mm × (20-70) mm(Ny habe manokana dia azo namboarina)
Famatsiana herinaratra mahazatra 380V / 50Hz (Azo noforonina arakaraka ny fenitry ny jiro countryelectricity mpanjifa)
Fanjifana herinaratra ao amin'ny KW 1.5kw
Fanjifana rivotra 20m³ / h
Faneriterena ny rivotra 0.5-0.8MPa
feo ＜ 80 dB
* HTH-120G Cartoner dia manao fonosana amin'ny maody mitohy sy mandeha ho azy miaraka amin'ny haitao haingam-pandeha sy mandroso.
* Ny Carton Loader Conveyor Belt dia 1600mm ny halavany, mitahiry be ny fotoana fametrahana baoritra.
* Ny fonony dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony 304 miaraka amina varavarana miaro fitaratra vita amin'ny alimo aliminioma.
* Ny masinina dia misy fantsom-pifaneraserana amin'ny masinina mba hanitsiana ny dingana rehetra mora. Izy io dia manana ny asan'ny fanaraha-maso statistika ary hampiseho ny lesoka rehetra na dia maneno fanairana aza ianao.
* Ny PLC sy ny rafitra elektro-optika dia apetraka hanaraha-maso ny fizotry ny fonosana. Ny masinina dia hampandre ny mpampiasa ny lesoka toy ny rehefa lany ny baoritra ny fitaovana na raha misy fitohanan'ny taratasy. Rehefa mitranga ny olana toy izany dia hisy fanairana hanaitra ny mpandraharaha. Ny isan'ny vokatra baoritra aseho eto amin'ity rafitra ity.
* Ny milina fonosana dia mampiasa fitaovana fiarovana marobe sy mandeha ho azy azo antoka, izay ahafahan'ny milina miaro tena sy misoroka ny fahasimbana mandritra ny fiasana.
* Rehefa manova ny entana dia tsy ilaina ny manolo ireo ampahany, azo ovaina mivantana amin'ny alàlan'ny mekanika fanitsiana. Ny ampahany fanitsiana dia mifatotra amin'ny visy azo ovaina amin'ny baoritra, izay mora ampiasaina ary azo ahitsy tsy misy fitaovana.
Tabilao mikoriana miasa
Detail momba ny masinina
Trano fitehirizana entana
Trano fitahirizana boaty
Fitaovana mivalona lela
Fehikibo vokarin'ny vokatra
Fanamboarana boaty elektrika
Reducer sy ny tsipika Air
Fanitsiana amin'ny antsipiriany
Modely sy famaritana
Toerana niandohana na marika
Modely manitatra PLC
Button fijanonana vonjy maika
Milina lakaoly mafana amin'ny ROBATECH
Ny atrikasa misy anay
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny masinina sy ny ozininay dia mankanesa ao amin'ny youtube anay hijerena. Azafady Chekc horonan-tsarimihetsika ataonay: https://youtu.be/ofDv6n86l9U
Teo aloha: HTH-120T Masinina fanaingoana sakafo mandeha ho azy tanteraka
Inona no hatao raha ny fahombiazan'ny sarety ...
Ny ho avin'ny fampandrosoana amin'ny ho avy ...
Tombony amin'ny fonosana mandeha ho azy sy ny fiara ...
Gexiang Industrial, Nanbin Street, Ruian City, Faritanin'i Zhejiang
Antsoy izahay izao: 0086-13506565432